आइसिटी लेख Archives - Page4of 13 - Living with ICT
Home / आइसिटी लेख (page 4)
सफ्टवेयर इञ्जिनियरिङ र यसको क्षेत्र
प्रविधिको प्रयोगले भइरहेका अकल्पनीय परिवर्तनहरूका पछाडि सफ्टवेयरको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । कुरा गरिरहनुपर्दैन कि, कम्प्युटर, मोबाइल, रोबोटजस्ता प्रविधि सफ्टवेयरले नै चल्ने गरेका हुन् । सफ्टवेयरको अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । नेपालमा पनि देश समृद्ध बनाउन सक्ने क्षेत्र हो, सफ्टवेयर । सफ्टवेयर इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले धेरै सम्भावनाहरू बोकेका हुन्छन् । सफ्टवेयर इञ्जिनियरिङ त्यस्तो क्षेत्र हो, जुन नितान्त समग्र …
आइटी पढ्ने सोच्नु भएको छ ? जान्नुहोस नेपालमा सञ्चालित आइटी कोर्सहरु
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका मूख्य आइटीकोर्सहरुमा बिएससी सिएसआइटी र बिआइटी रहेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका स्नातक तहमा रहेका मूख्य आइटीकोर्सहरु कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर एप्लिकेशन (बिसिए), कम्प्युटर एप्लिकेशन (अनर्स) र बिआइटी रहेका छन् । काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको मूख्य आइटी कार्यक्रमको रुपमा बिइ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ) रहेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको स्नातक तहका आइटि कोर्सहरुमा कम्प्युटर साइन्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इन्जिनियरि, इन्जिनियरिङ इन इन्फरमेशन टेक्नोलोजी, सफ्टवेर …
बिएससी सिएसआइटी पढेर के हुन्छ ? यस्ता छन् स्कोप
बिएससी सिएसआइटी (Bachelors of Science in Computer Science and Information Technology) त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ल्याएको चार वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम हो । आठ ओटा सेमिस्टरमा अध्यापन गराइने विएससी सिएसआइटी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालमा पहिलो पटक भित्र्याएको सेमिस्टर कार्यक्रम हो । नेपालमा हाल ५३ वटा कलेजहरुमा यो कार्यक्रम अध्यापन भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले वि.सं. २०६४ सालमा याे कार्यक्रम डिजाइन …
कमटेकबाट आइसिटी क्षेत्रले गरेको अपेक्षा
सञ्चार प्रविधिको प्रदर्शनी क्यान कमटेक २०१६ विहीबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । पछिल्ला प्रविधि र सेवालाई नेपाली समाजमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यका साथ सुरु भएको कमटेक ४ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । योसँगै नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रको विकास र विस्तारमा भइरहेका प्रयास र चुनौतीलाई लिएर पुन: सार्वजनिक बहस हुन थालेको छ । देशमा सबैभन्दा बढी विस्तार भएको सञ्चार क्षेत्र …
स्टार्टअप बिजनेशअघि पर्याप्त रिसर्च आवश्यक छ : अध्यक्ष पौडेल
भेषराज पाैड्याल अध्यक्ष, अाइसिटी एशाेसिएसन अफ नेपाल पहिलो कुरा त जसले बिजनेश स्टार्ट गरेको छ, उसकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मुख्य कुरा भनेको समसामयिक चुनौतीलाई समाधान गर्ने आइडियालाई व्यावहारिक रूपमा उतार्न लामो समय रिसर्च आवश्यक छ । रिसर्च नगरी प्राक्टिकल देखिँदैन । यसकारण म सबैभन्दा पहिले ‘डिप रिसर्च’लाई प्राथमिकता दिन्छु । रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट (अारडी) मा ४/५ महिना समय र …
कस्तो अाइटी कलेज छान्ने ?
Sep 2, 2016	Comments Off on कस्तो अाइटी कलेज छान्ने ?
आइटी शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि नेपाली विश्वविद्यायलदेखि विदेशी विश्वद्यालयका आइटी कार्यक्रमहरु रहेका छन् । यस्ता आइटी कार्यक्रमहरु सरकारी क्याम्पस तथा निजी कलेजहरुले पढाउँदै गरेका छन् । यहाँ आइटी शिक्षा अध्ययन गर्नअघि छान्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरुको बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ : संबन्धन तथा एक्रिडिटेसन तपाईले अध्ययन गर्न खोजेको आइटी कार्यक्रम कुन विश्वविद्यालयको हो, त्यसबारे पहिले ध्यान दिनुहोस् । नेपलमा …
नेपालको आधुनिकिकरणमा गुगल म्यापको उपयोगिता
ई. उद्धव कुमार साह uddhavsah@yahoo.com नेपाल जस्तो प्राकृतिक तथा भौगोलिक बिबिधता भएको देशमा अवस्य पनि हरेक ठाउमा यातायातका साधन श्रोत पुर्यौन गार्हो छ तर प्राबिधिक रुपमा पक्कै पनि छैन । कम्प्युटर प्राबिधि प्रयोग गरेर हामी नेपालको हरेक कुना कुना सम्म पुग्न सक्छौ । यसका धेरै नै फाइदाहरु छन् । यसलाई संसारका सबै मुलुकहरुले प्राय प्रयोग गरिरहेका छन् । हो पक्कै …